ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ အသံမဲ့ မျက်ရည်မဲ့ ငိုခြင်း
ဒီညလည်း အိပ်မပျော် လန့်နိုးလာခဲ့ပြန်ပြီ။
အတွေးတွေနဲ့ ကြောက်လန့်တကြား လန့်နိုးခဲ့ရတဲ့ အိပ်ပျက်ညတွေ အတော်များပြီပဲ။
တကယ်ဆို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သင့်သည် ။
ဘာအတွက် ထိတ်လန့်နေသလဲ ဘာကို ကြောက်ရွံ့ နေသလဲ
ဘာက ကျွန်တော့်ကို တုန်ရီလှိုက်မောစေသလဲ
အဖြေမရှိသော ပုစ္ဆာတော့မဟုတ်ပါ ။
ရင်တွင်းတနေရာရာက တုန်တုန်ရီရီဖြစ်နေတာ သေချာသည် ။
တစ်ခုခုကို ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတာ သေချာသည်။
အချိန်က ည နှစ်နာရီ လူတွေအားလုံး အိပ်မောကျနေချိန် ဒါလည်း သေချာသည် ။
ကံကြမ္မာဆိုးတွေ ထပ်ဝင်လာမှာကို ကြောက်နေတာများလား။
အတိတ်တုန်းကလို သေချင်လောက်အောင် ပူဆွေးသောက ရောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေနဲ့ ထပ်ကြုံရမှာကို ကြောက်နေတာ ထင်ပါရဲ့ ။
ဒါပေမယ့် အခုရော . . .
ဒီ လူ ရဲ့ ရပ်တည်မှုက တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေလို့လား။
အခု ရက်တွေဟာ ဘယ်အချိန် ထပေါက်မယ် မသိတဲ့ ဗုံးတစ်လုံးကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ထိုင်ကြည့်နေရချိန်ပါ ။
တချိန်မဟုတ်တချိန်မှာ တစ်စစီကြေမွပျက်စီးသွားမှာ သေချာနေတဲ့ နေ့တွေပါ ။
ဒီဘဝမှာ ဒီလို သောကတွေနဲ့ မအေးချမ်းနိုင်တာ အရင်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝ ဘဝတွေမှာ ဘာဝနာ အားနည်းခဲ့လို့တဲ့ ။ ဟုတ်လား။
ရင်ဝမှာ ဒဏ်ရာတန်းလန်းနဲ့ ညများ
* ရင်ဝမှာ. . .ဒဏ်ရာတန်းလန်းနဲ့ ည *
ကြယ်တွေ လတွေ ဝေဆာနေတဲ့. . .
သူတို့တွေရဲ့ ညများ. . . .
ငါနဲ့ ငါ့ညလေးတွေက အားကျလိုက်ပါတယ်
ညဟာ . . .ည မပီသလွန်းလို့. . .
လူမမည်သေးတဲ့ လူအတွက်. . .
ညမမည်သော ညတွေကပဲ. . .
တုတ်ဆွဲဓါးဆွဲ ထိုးခွဲဝင်ရောက်. . .
ကွယ်. . .
ငါကမှ မစားချင်တာ. . .
ဆူးချွန်တွေနဲ့ ဖိအုပ်တတ်သော ညတွေထဲ
အတောင်ပံမရှိပဲ ပျံသန်းရတာ. . .
မောလိုက်တာကွယ်. . .
ငါ့သတ္တိတွေလည်း အတုံးအရုံး. . .
ဓါးမိုး ရွာသလို ခုန်ဆင်းလာတတ်. . .
ငါ့ရင်ဝမှာလည်း. . .ဒဏ်ရာတန်းလန်းတွေနဲ့ . . . .
ပျော်ရွှင်ရခြင်း နတ္ထိနဲ့ . .
လှီးဖဲ့ခံရရင်းနဲ့ပဲ. . . .
ငါနဲ့ ငါ့ညတို့ ပါးလျ. . . .
မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုလ်စရာတောင် မကျန်ဘူးထင်ရဲ့. . . .
မိစ္ဆာဆန်တဲ့ ညတွေထဲ . . .
လူးလွန်းကြီးထွား. . . .
အင်းလေ. . . .
ငါ့အတွက် အမြတ်ပေါ့. . . .
26 / 1 / 2014 / sunday /15 : 55 pm
စနစ်ကြောင့်လားး အကျင့်ကြောင့်လား. . .
သူရ တော်တော် စိတ်လေသွားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက မဖြစ်သင့်တာ တော်တော်များများ ဖြစ်နေပြီး ဖြစ်သင့်တာတွေကတော့ ဖြစ် မနေဘူး။ ဒီတော့ ဟိုတွေးဒီတွေး ဟိုမြင် ဒီမြင် ဖြစ်တတ်တဲ့ သူရကို မြန်မာပြည်ကြီးက အတော် စိတ်ပျက်စေတယ် ။
ဟိုတနေ့က သူရရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ စကားစမြည်ပြောရင်းနဲ့ သဂျီးပြောပြောနေတဲ့ စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကို သတိရသွားပြီး အတွေးပွါးများခဲ့ရသေးတယ်။
အဲဒီမိတ်ဆွေနဲ့ သူရ ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံနားကနေ လမ်းဖြတ်ကူးတာပါ။ လူကူးမျဉ်းကျားကနေကူးတာပါပဲ။
တန်းစီပြီး ကူးဖို့စောင့်နေတာကို ခဏရပ်ပြီးကူးစေဖို့ ကားသမားတွေမှာ စိတ်ကူးမရှိဘူး။ ရပ်ပေးစရာ မလိုသလိုပဲ။ သူရတို့က ကားအကျဲမှာ အတင်းဖြတ်ပြေးဖို့ ကြိုးစားရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကားအကျဲလေးမှာ အသည်းအသန်ကူးလို့ အတိုက်ခံရပြီးသေရတဲ့ အသက်တွေ များလှပြီ ။ ပြီးတော့ သူရတို့ ဖတ်ကူးမယ် ဟန်ပြင် လိုက်တာနဲ့ ဟိုခပ်လှမ်းလှမ်းက လာနေတဲ့ကားက မီးတွေတောက်ပြနေပါလေရော။ အင်း ဖြတ်မကူးနဲ့ဦး။ သူတို့ကတော့ ရပ်ပေးဖို့ အစီအစဉ်မရှိလောက်ဘူး။ အရှိန်နဲ့ မောင်းမြဲ ဆက်မောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါ့လေ။
မီးတွေ တဖျတ်ဖျတ်တောက်ပြပြီး အရှိန်မလျှော့ပဲ မောင်…
ဘဘဂျီးတို့ ဖတ်ဖို့ကျနော့်မှတ်စုများ
လမ်းလျှောက်နိုင်သူ ဘယ်လောက်များများ လမ်းဖောက်ခွင့် . . .
လမ်းလျှောက်ခွင့်မပြုပဲ ပိတ်ထားတဲ့လမ်းတွေ များနေရင် ဘယ်ခရီးမှ မရောက်နိုင်ဘူး။
ခေတ်မီဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကို စကားလုံးတွေ မိုးလားကဲလားပလူပျံနေရုံ . . .
စာသားလှလှတွေ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့သုံးပြနေရုံနဲ့ …..တည်ဆောက်လို့မရဘူး ။
အဲဒီလို စာအုပ်တွေ မလိုချင်ဘူး..။
ယူနီဖောင်းကြီးတွေ ၀တ်ပြီး.. စာအုပ်တွေ အတင်းလာထိုးရောင်းရင်..မ၀ယ်ချင်ဘူး..။
ရန်ပုံငွေ အဖြစ် ရောင်းတယ်ပဲ..ဆိုဆို… သူတို့ အဖွဲ့ အစည်းတွေရဲ့အပိုငွေ ရှာမှုပဲ..ပြောပြော..
တခြားနည်းနဲ့ငွေ ရှာစေချင်တယ်… ။
ကိုယ်မကြိုက်တဲ့စာအုပ် ခပ်ညံ့ညံ့တွေကိ်ု…မတန်တဆဈေးတင်ပြီး မ၀ယ်ရင်ပဲ.. ဖမ်းချုပ်တော့မလိုလို…
အိုက်တင်ကြီးတွေနဲ့ … လူအင်အားပြ ယူနီဖောင်းအင်အားပြပြီး အတင်းလာ…ထိုးမရောင်းနဲ့ … ။
အဲဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေ ..မ၀ယ်ချင်ဘူး ..။
ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကို… ကြိုက်တဲ့ နေရာမှာ..သွားပြီး… လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ် ၀ယ်ယူခွင့် ရပါရစေ… ။
သေဆုံးသွားသော…. ….. …. ….
သေဆုံးသွားသော…. ….. …. …. * ပြေးနေတဲ့လမင်းကို
လိုက် ဖမ်းဖို့ …. …
ကိုယ် ထူခဲ့တဲ့ အလံဖြူတို့ ကို လှဲ….ပစ်ခဲ့ပြီ။
* မရေရာခြင်း စိုက်ခင်းထဲမှာ…မှ
ကိုယ်က အချစ်တစ်ပင် စိုက်ခဲ့မိ ။
သွေးစက်နီနီတို့ နဲ့လောင်း……….ပက်…..
* ချစ်သူရေ…… …..
အနောက် တောင် ဘက်က အက်ဆစ်မိုးက
* အရည်ပျော်….သွားတဲ့ ပျိုးခင်းထဲမှာ…
ထာဝရ နှုတ်ဆက်ခြင်း..နဲ့ 
* ( ကိုယ့်ဒဏ်ရာ / ကိုယ့်လက်နဲ့ဖိ.ရင်း…)
သေသွားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအတွက်
ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်ပဲ… လူညံ့ လို့မှတ်ပါ့မယ်။
* ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန် ခုတ်နေတဲ့
ဓါးတစ်လက် ရဲ့ မိုက်မဲမှုမျိုး…ကို
အချစ်ကြောင့် ပွင့်သော ပန်းကလေးများ….
ခပ်ညံ့ညံ့ ယောကျာ်းတွေကို အထင်မကြီးတတ်သော သီတာ့ ကို ကျွန်တော် ချစ်ပါသည် ။
သီတာ သည် ကျွန်တော့် အိပ်မက် ဦး..ဖြစ်သည် ။ သီတာ့အကြောင်းကို ခေါင်းစဉ်များစွာ..ဖြင့်
အိပ်မက် မက်ရတာ ..ကျွန်တော်..ပျော်ပါသည် ။
ကျွန်တော် သည်…သီတာ့ကို ချစ်သောကြောင့်…ယဉ်ယဉ်လေး ရူးနေသော…လူငယ်အဖြစ်..ရှင်သန်ခဲ့ဖူးပါသည် ။
ကျွန်တော့် ဘ၀တစ်ခုလုံးကို… အထပ်ထပ်အခါခါ..ရစ်ပတ် တုပ်နှောင် ခံလိုက်ရပြီးမှ…
အချစ်၏ နှောင်ကြိုး ဆန် မှုကို….ကောင်းကောင်း ..သိသွားသည်..။
စစ်ကူ..ရှိ – ရှိ ..မရှိ ရှိ…၊ ရဲရင့်နေမယ့်..သူ..
ဒီနေ့ ငါ သော့တစ်စုံ ၀ယ်ခဲ့တယ် ။
ဒါပေမယ့်.ငါ ..သော့တစ်စုံ လိုအပ်နေပြီ။
ဒါကြောင့် သော့တစ်စုံ ၀ယ်ခဲ့တယ် ။
ငါ့ နှလုံးသားကို..သော့ ခတ်..သိမ်းဆည်း..ဖို့ ……။
ပြဿနာကို ငါက စခဲ့တာလား..။ ဖြစ်ချိန်တန်..လို့ ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာ..လို့ ပဲ.ငါ ထင်ပါတယ် ။
နင့်ကိုငါ… အများကြီး.မျှော်လင့် ထားတာပါ ။ နင်က ဥာဏ်ကောင်းတယ်..။ ရဲရင့် သွက်လက်တယ် ..။ ပြီးတော့ ချစ်စ၇ာကောင်းတယ်.. ။
နင့်ရဲ့ ဘ၀ကို ဟိုး …အမြင့်ဆုံး..ဆိူတဲ့ နေ၇ာတွေ..မှာပဲ..ရှိနေစေချင်တာ..ငါ့အပြစ်လား..။
နင်ကြိုက်တဲ့ကိုရီးယား…ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ.ကို.မကြည့်ပါနဲ့ ..လို့ ပြောတာ..၊ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ.ရှေ့မှာ.ကုန်သွားမယ့် အချိန်တွေကို..နှမြောလို့ .
မတတ်သေးတဲ့ အတတ်ပညာ တစ်ခုခု သင်ယူ သင့်တယ်..လို့ ..တိုက်တွန်းတာတွေ…ဟာ..အဲဒါ..နင့်အတွက်..
ကောင်းစေချင်လို့ ပြောတာပါ ဟာ..။
နင်ပဲ..စဉ်းစားကြည့်လေ..။ နင် ခုထိ ကြည့်နေတဲ့ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ထဲက နင်…
ည = ညအခါ…. လ..သာ..သာ…
ကစားမလား… နားမလား…တွေ ဘာတွေ မေးနေရမယ့် အရွယ်တွေကို လွန်…ခဲ့ပြီ.ဆိုတော့…………
ကျွန်တော့်အရွယ်နဲ့ … ဆိုင်တာလေးကိုပဲ.ပြောကြည့်ပါမယ်.ဗျာ..။
ညအခါ…. လသာသာ မှာ………….
မိတ်ဆွေများ…. ကဗျာ… ရွတ်ဖူးကြပါသလား….
ညအခါ..လသာသာ မှာ.. ကဗျာ ရွတ်ဆိုနေသံ လေး တစ်ခုကို….
လသာ တဲ့ ညတွေမှာ…. ကဗျာတွေ စပ် ဖူးတယ် ။
ကဗျာ လေးတွေ.ကို…ရင်ခုန် မက်မောစွာ..ရွတ်ကြည့်ဖူးတယ်..။
သူတပါး..ရွတ်ပြတဲ့ကဗျာသံကိ်ုတော့ ………….. နား မထောင်ဖူးသေးပါဘူး ။
အင်မတန်မှ လည်း..နားထောင်ကြည့်ချင်ပါတယ် ။
မြို့ ပြရဲ့အဆောင်အယောင်တွေ….. ကင်းစင်..ရာ…ကျေးလက် တစ်နေရာရာမှာ……………
သစ်ရွက်သစ်ခက်..တွေရဲ့လှုပ်ရှားသံ…ခပ်တိုးတိုး….
လေပြည်ညင်း ရဲ့ ….. အေးမြမှု ခပ်ရိုးရိုး..နဲ့ …..
၀ါး ကွပ်ပျစ် လေးပေါ်….. ပက်လက် လှဲ..ပြီး… ကောင်းကင်မှာ. ထိန်ထိန်သာနေတဲ့ …..
ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လောက်…. ရွတ်ပြ တာကို…
ကျွန်တော့်ကို…. ဘယ်သူ များ..ကဗျာ ရွတ်ပြမလဲ….?
မသာတစ်ကောင်၏ မှတ်စုများ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ဒီနေ့ ။ ။ __________
ကောင်းကင်ကို မတော်တဆ ကြည့်မိသည် ။ ကျွန်တော် ကြည့်လိုက်သည့်အခိုက်မှာပဲ ဖြုတ်ခနဲ ကြွေကျသွားသော ကြယ်တစ်ပွင့် ။ အဲသည် ကြယ်ပွင့်ကလေး ရဲ့ လက်ထဲမှာ ” Art ” ဆိုသော စာတန်းကလေးတစ်ခု ကိုင်လျက်သားးး ဇောက်ထိုးးးး မိုးးးမျှော်ာ်ာ်ာ် လိမ့်ကာာာာ လူးကာာာာ သက် . . .ဆင်းးးးးကွယ်ယ်ယ် ပျောက် . . . ။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ တုန်ရီလှိုက်မော . . . ဟင်းးးးခနဲ သက်ပြင်းးးတစ်ချက်ချရင်းးးး ကိုယ့် မှတ်တမ်းတွေ ပြန် လှန်ကြည့်မိသည် ။ ငါ ဘယ်လောက် ကြာကြာ လင်း နိုင် ဦးမှာ ပါလိမ့် လို့. . . . . သီချင်းကလေးလို ညည်းလိုက်သည် ။ ######################### နှစ်ရက်မြောက်သော နေ့ ။။ ___________ ဆိုးဝါးမှု တစ်ခုခု ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ။ သူတို့ကြောင့် လို့လက်ညှိုး ထိုးပစ်ချင်လို့ပြတင်းတံခါးကို ဆွဲ ဖွင့်လိုက်၏ ။ ပြတင်းတံခါး အပွင့်မှာ … … … အပြင်ဘက်က လက်ညိုးတွေ . . . ကျွန်တော့်ဘက်ကို ပြွတ်သိပ်ပြီး ဝင်လာသည် ။ ဘုရားးးးးးးးး အပြင်မှာ … … … ကျွန်တော့်ကို လက်ညိုးတွေ အများကြီး ဝိုင်းထိုးရလောက်အောင် ဘာတွေများ ဖြစ်ပျက်နေပါလိမ့် ။ ကျွန်…
ဆက်ရေးဖို့ . . .စကားလုံး မရှိတော့တဲ့စာ. . .
ကဗျာတချို့ စာတချို့ ချို့ချို့တဲ့တဲ့ ရေးနေတယ် ။
အခုလည်း အချစ်ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ် အဟုတ်ရေးမလို့ ။
သူရဆိုတာ အချစ်ကို ဘာမှန်းသေချာမသိသေးပဲ. . . အချစ်ဝတ္ထု ရေးမလို့ ဆိုတော့. . . .
ဒါပေမယ့် သူရ ရေးမယ့် အချစ်ဇာတ်လမ်းက သမားရိုးကျဆန်နေမလား . . .
ကြည့်. . .
သူရရေးမယ့် ဇာတ်လမ်းထဲမှာ. . .
ကောင်လေးတစ်ယောက် ရယ်. . .
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရယ် . . .
ဇာတ်ကောင်ဆိုလို့ နှစ်ယောက်ပဲ ပါတယ် ။
ကောင်လေးကို . . .
ချောချောဖြောင့်ဖြောင့်လေး လို့ မထင်နဲ့ ။
ရုပ်လုံးဝ မချောတဲ့ မည်းမည်းပိန်ပိန် ခပ်တုံးတုံးခပ်အအ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ ။
ရုပ်မျိုးနဲ့ ပေါ့ ။
ဒီကောင်လေးဟာ ရုပ်ဆိုးပေမယ့် ချစ်တတ်သော နှလုံးသားတော့ ဝိုးတဝါးမဟုတ်ပဲ ပီပီပြင်ပြင်ရှိတယ် ။
နတ်သမီးအိပ်မက်ကို မက်ချင်တာပေါ့။ အချစ်ဆိုတဲ့ သစ်သီးကို ချဉ်တယ်ဆိုရင်လည်း စားချင်တာပဲ ။
သူရရဲ့ ဝတ္ထုထဲက ကောင်လေးဟာ . . .
မထင်မှတ်ပဲ . . .
သူ့ ရဲ့ နတ်သမီးလေးတစ်ပါးကို ဘွားခနဲတွေ့ လ…
ကျွန်တော် နှင့်…. အချစ် / အလွမ်း ….
ဒီဘဝ မှာ ဖြင့် အချစ်ဆိုတာကို
မတွေ့ ရတော့ဘူး ထင်ထားသမျှ လွဲချော်တိမ်းစောင်းပြီး သူမ နှင့် ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါသည် ။
အဆုံးသတ် လှမယ် မလှဘူးသေချာ မသိနိုင်သေးသော်လည်း သူမနှင့် ယခုလို တွေ့ ဆုံ တွယ်တာ ခဲ့ရရုံ အဖြစ်ကလေးကိုပဲ ကျွန်တော် ကျေနပ်လိုက်ပါသည် ။
အချစ်သည် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကြယ်ရောင်မှုန်မှုန်ဖြင့်
သာမန် ညတစ်ည သာဖြစ်ပါသည် ။
ခင်းကျင်းပေးခဲ့ရမည့် လမ်းတွေရော အများကြီးရှိနေပါသည် ။
လမ်းတွေ ပေါ်မှာ . . . . . .
လျှောက်လိ်ုက်ခင်းလိုက်ဖြင့် မအားလပ်နိုင်အောင် ဖြစ်နေသော
အချစ်ဆိုတာ ဖြစ်လာရန်ခက်ခဲသော နတ်သမီးအိပ်မက်တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော် ထင်မှတ်ခဲ့ဖူးသည် ။
ဒါပေမယ့် အဲသည် မအားလပ်အောင် ရှုပ်ပွနေသည့်အလုပ်တွေထဲမှာ အင်တာနက် အွန်လိုင်းပေါ်မှ နေ၍ ပြုလုပ်နေရသော အလုပ်တွေ ပါဝင်နေခြင်းက သူမနှင့်ကျွန်တော် ဆုံတွေ့ ဖြစ် စေခဲ့တာဖြစ်သည် ။
သူမ က ကျွန်တော် ရေးသော အင်တာနက်ပေါ်မှ စာများ ကဗျာများကို ဖတ်မိခဲ့သူ ။
ကျွန်တော့် Mail လိပ်စာနှင့် ကျွန်တော့် ဓါတ်ပုံများကလည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ အလွယ်တကူရှာဖွေ လို့ ရနေ…
နင့်ကို ငါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နင်ရယ်
ငါ့အတွက်ဆို ကံကြမ္မာက ဓါးထမ်းပြီး လာနေကျပဲ အဲဒီလို ငါ မကြာခဏရေးဖူးတယ် ။
တကယ်လည်း ဟုတ်တယ် ။
ကြာတော့ ငါက. . . ကံကြမ္မာဆိုတာကြီးကို ကြောက် ရွံ့ ခြင်းကတစ်ဖက် . .
လာစမ်းကွာ ဆိုပြီး ရင်ကော့ ခေါင်းမော့ အရွဲ့ တိုက်လိုက်ချင် စိတ်က တစ်ဖက်နဲ့. . .နှလုံးသားမှာ အသားမာတောင် တက်လာတယ်။
ငါ စဉ်းစားတယ် ။ ငါ ဖြစ်နေတဲ့ အကျိုးတရားတွေကို ကြည့်ရင်. . .
ငါ လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတရားက တော်တော် ကမောက်ကမ နိုင်ခဲ့တာပဲ လို့ ။
အခု ငါ လုပ်နေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကလည်း . . ကစဥ့်ကလျားနဲ့. . .
ဆိုတော့ နောင် တစ်ချိန်မှာရော ငါ့ကံကြမ္မာရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ. . . . .
အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ငါဟာ. . .
မီးခိုးတစ်စလို ဝေဝေဝါးဝါး. . . .
တုန်ရီလှိုက်မောစွာ မျောနေရတဲ့. . .
လေစီးကြောင်းထဲက အမှိုက်တစ်စပဲ ။
ငါ မတည်ငြိမ်သေးဘူး ။ မရင့်ကျက်သေးဘူ ။
ဘယ်အရာကို ဖမ်းဆုပ်သင့်တယ်. . . ဘယ်အရာကို လွှတ်ချထားခဲ့သင့်တယ်ဆိုတာတွေ
ငါ သေချာ မခွဲခြားတတ်သေးဘူး။
ငါ့လက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်မိတာတွေဟာ. . . ငါ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ မအပ်စပ်တာတွေရော. . .
ငါ့ခံနိုင်ရည်ကို အကြိမ်ကြိမ် ထိုးသတ်ခုတ်ဖြတ…
မေ့ကို မောင် လွမ်းတယ် မေရယ် . . .
မေ့ကို မောင် လွမ်းတယ် မေရယ် . . . မောင်နဲ့မေတို့ အချစ်ကို လူကြီးတွေ သဘောမတူဘူးတဲ့. . . .ဆိုသည့် သီချင်းစာသားလိုပင်ဖြစ်နေသည် ။
ကျွန်တော်ချစ်သော မေ နှင့် ကျွန်တော့်ကို မိဘများက သဘောမတူကြ ။
ကျွန်တော်က သူမကို မေ ဟု ခေါ်သည်။
သူမက ကျွန်တော့်ကို မောင် ဟုခေါ်သည်။
တကယ်တော့ ရိုးရိုးကလေးသာ ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်၏ ချစ်ခြင်းက ပစ်ခွင်းဖြိုဖျက်ပစ်ချင်စရာ ပစ်မှတ်တစ်ခုလို့များ ထင်ကြလေသလား မသိ ။
မိဘများက သဘောမတူ ။
မေ့ မှာ ဘာအပြစ်ရှိသနည်း ။
မေ့ဘက်မှ အသိုင်းအဝိုင်းက ကျွန်တော့်ကို လက်ခံသဘောတူနိုင်ပါလျက်နှင့် . . .
ကျွန်တော့်ဘက်မှ အသိုင်းအဝိုင်းက မေ ဆိုသော ကျွန်တော့်ချစ်သူကို လက်မခံနိုင်ကြ။
တကယ်တော့ မေသည် . . .သာမန်မိန်းမတစ်ယောက်သာဖြစ်ပါသည်။
ရုပ်ရည်ကအစ အစစအရာရာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသာ ဖြစ်သည် ။
ကျွန်တော်ကရော ဘာများ ဆန်းနေလို့လဲ။
သဘောမတူစရာ အကြောင်း မရှိသင့်ပါ။
မေနှင့် ကျွန်တော် အချစ်ကြီး ချစ်မိကြခြင်းသည် အပြစ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေသလိုမျိုး မမြင်ကြလျှင် ကောင်းမည် ။
မေ့ ကို ကျွန်တော် ချစ်သည် ။
မေနှင့် တစ်နေ့ မတွေ့ ရ လျှင် တစ်သံသရာစာလောက် ကျွန်တော် လွမ…
တစ်ခါက နေများ ညများသည် . . .အရာရာမှုန်ဝါးဝါးဖြစ်သွားဖို့ ရာက စောနေသေးသလားမသိ ။
ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ဖြင့် သက်ရောက်မှုကင်းကင်း ခပ်ရှင်းရှင်းဖြစ်စေချင်သော်လည်း . . .
အင်းလေ. . .
ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ . . .
တဟဲဟဲ ရယ်ပြရုံကလွဲလို့. . .
အဲသည်အချိန်က ကျွန်တော် . . .17 နှစ် ။
ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရည်းစားတစ်ယောက်ထားဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး မကြာခင် . . . မိန်းမလှလေးတစ်ယောက်နှင့် ဇာတ်လမ်းစဖြစ်ခဲ့သည် ။
ဆောင်းအကုန် နွေအကူး . . .ချမ်းဦးမှာလိုလို . . .
မချမ်းတော့ဘူးလိုလို ညများသည် မိုးဆိုသော ကောင်မလေးကြောင့် နွေးထွေးသွားသလိုပင် ။
အဲသည်တုန်းက . . . ကျွန်တော့်ရွာကလေးဆီမှာ . . .ဘုရားပွဲဆိုပြီး ဇာတ်တွေ ပွဲလမ်းသဘင်တွေ ချိမ့်ချိမ့်သဲသဲ ကျင်းပနေပြီ ။
ညနေဆို ပွဲဈေးတန်းလမ်းလျှောက်ဖို့ လူပျိုအပျိုတွေ ပြင်ဆင်ကြ ခြယ်သကြ ။
တစ်နေ့တာလုံး တောင်ယာလယ်လုပ် ပင်လယ်တံငါ သမားတွေရဲ့
ဘဝ အမောတွေ . . .
အဲဒီ ပွဲဈေးတန်းထဲ လမ်းလျှောက် ဟိုသည်ငေးလိုက်ရုံနဲ့ ပြေပျောက်သွားမလိုမျိုး. . . .
ကျွန်တော် နဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်စုသည်လည်း
ပွဲဈေးတန်းဆီသွားပြီး ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ေ…